INGXELO YENKQUBO YENKAMPANI -I-MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD
I-MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO. LTD yasekwa ngo-2008. Ngumboneleli ngenkonzo ye-Interface esekwe kwii-smart sensors. Emva kweminyaka engaphezu kwe-10 yophuhliso oluqhubekayo kunye nokuyila, iMEOKON iye yaba ngumenzi ophambili wase-China kunye nodumileyo kwihlabathi lezixhobo zoxinzelelo. Kwicandelo lokuvelisa uxinzelelo, i-MEOKON iseke itekhnoloji yayo ekhokelayo kunye nezibonelelo zebrendi, ngakumbi kwicandelo lesicelo se-hydraulic, impompo kunye ne-air compressor, iMEOKON ibe luphawu oluphambili lwase China.
IMEOKON lishishini lobuchwephesha eliphezulu kunye nelitsha kunye neemveliso eziphambili: isilinganisi soxinzelelo lwedijithali, iswitshi yoxinzelelo lwedijithali, isilawuli soxinzelelo olunengqondo, isivamvo soxinzelelo kunye nokudlulisa uxinzelelo, isixhobo. Iseti ye-R & D, uyilo, imveliso kunye nentengiso kwiyunithi enye yobungcali. Sineentlobo ezingaphezu kwe-100 ezichaziweyo zeesenzi kunye nezixhobo zokuhambisa. Ngokweemfuno zabathengi, iintlobo ezahlukeneyo zokuziva, izixhobo zombane zokubonisa ulawulo kunye neenkqubo zokulinganisa zinokwenziwa. Iimveliso zeMEOKON zisetyenziswa ikakhulu kwezi nkalo: isiguquli somoya, ubuchwephesha beemoto, ispur kunye noxinzelelo lwamanzi, inkqubo yokuhambisa amanzi, ukunikezela kuluhlu olubanzi lwesenzi, isixhobo sokuhambisa, ukulinganisa nokulawula isixhobo, inkqubo yokufumana umhla. yenziwa ngayo yonke inkqubo yokuvelisa. Iimveliso zethu zilungele imigangatho yemizi-mveliso, enje nge-CE, i-CPA. Abanye, sineqela elifanelekileyo labasebenzi kunye nenkcubeko yamashishini: intlanganiso yezemidlalo, imiboniso yenkcubeko, amaqela, ukhenketho kunye neminye imisebenzi. I-MEOKON ikhangele phambili ngentsebenziswano yakho!
Izixhobo zethu eziphambili zokuvelisa zingeniswa ngokuthe ngqo ukusuka e-US naseJamani
Sineenjineli ezingama-20 kwiziko lethu le-R & D, iinjineli zesoftware ezisi-7, kunye neenjineli ezili-13 zekhompyutha.
Ulawulo lomgangatho oqinileyo
Siza kwenza umgangatho oqinileyo wokukhangela okungenayo kwaye senze i-100% yokungena.
Iimveliso ngentando ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana ngombono wakho nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
Sinabasebenzi abangaphezulu kwama-30 kumasifundisane kwaye bonke bebeqeqeshelwa umsebenzi. Uninzi lwezixhobo zethu zovavanyo zingeniswa zisuka e-US naseJamani eziya kuthi ziqinisekise ukuchaneka kwethu kunye nomgangatho wazo. Iziphumo zonyaka ziphantse zaziiziqwenga ezingama-400,000 (2018).
ISebe leR & D
I-R & D lisebe elizimeleyo kwinkampani yethu kwaye ikwadlala indima enkulu kuphuhliso lwethu. Inkampani yethu ngoku ineenjineli ezimalunga nama-20, iinjineli zesoftware ezisixhenxe, kunye neenjineli ezili-13 zekhompyutha. Isiseko sePCB kunye nesoftware algorithms konke kwenziwa ziinjineli ngokwazo! Apha ngezantsi kukho imifanekiso yakho
I-MEOKON ngoku inabasebenzi abangaphezu kwama-70 kwaye ngaphezulu kwama-80% bakwinqanaba lesidanga sokuqala.
Uhlobo lwehlabathi luxhaswa yinkcubeko. Siyiqonda ngokupheleleyo inkcubeko yakhe yokudibanisa inokwenziwa kuphela ngeempembelelo, ukungena kunye nokudityaniswa. Ukuphuhliswa kweqela lethu kuxhaswe ngamaxabiso asisiseko kule minyaka idlulileyo -------Innovation, ukuthembeka, intsebenziswano, eyiyo.
Izinto ezintsha zisenza sahluke
Siyaqhubeka nokwenza izisombululo ezitsha ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokuhlangabezana nayo yonke imiceli mngeni
Ukunyaniseka akuyona into elungileyo kuphela, kodwa kukwangumoya wobungcali
UMEOKO udinga abantu abathembekileyo, umntu onyanisekileyo, ishishini elinyanisekileyo, unokuhamba kancinci kwixesha elifutshane, kodwa ngokuqinisekileyo liza kuzinza
Iindlela ezifanelekileyo ziya kusenza siphumelele emsebenzini. Iindlela zokusebenza ezifanelekileyo kunye nolawulo olululo lwexesha ziyakwazi ukwenza zonke iintlobo zomsebenzi kakuhle
Umoya weqela lilitye lembombo lokukhula kwethu ngokukhawuleza;
Sebenzisanani kunye kwaye nifunde kumandla omnye nomnye ukuzenzela ubuthathaka babo ukuze nenze umdlalo opheleleyo
Izatifikethi zenkampani yethu kunye namanye amalungelo awodwa omenzi wechiza
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza isatifikethi
Umboniso esiya kuwo
•Ebuza kunye nenkxaso kokubonisana, kwiminyaka engaphezu kwama-10 yamava
•Injineli yokuthengisa inkonzo yezobugcisa
•Umnxeba oshushu wenkonzo uyafumaneka nge-24h, uphendule ngeeyure eziyi-8
•Uvavanyo lwezixhobo zobugcisa
•Ukufakwa kunye nokulungisa ingxaki yokujongana neengxaki
•Uhlaziyo lwesondlo kunye nophuculo
•Iwaranti yonyaka omnye. Nika inkxaso yobuchwephesha simahla kubo bonke ubomi beemveliso
•Gcina ubomi bonke unxibelelana nabathengi, fumana ingxelo ngokusetyenziswa kwezixhobo kwaye wenze umgangatho weemveliso uqhubeke ugqibelele